चार सय बढीले चुमे सगरमाथा, सरकारको कमाई ३६ करोड बढी
यस वर्ष ४०० बढीले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । यसबाट मात्र ३६ करोड १४ लाख ९८ हजार ३२१ रोयल्टी संकलन भएको छ । ३० वैशाखदेखि शुरु भएको वसन्त ऋतुको आरोहण जेठ ११ गतेसम्म चलेको हो । यस याममा ४०० भन्दा बढीले आरोहण सम्पन्न गरेका छन् ।
शेर्पा संघबाट ‘उपाध्यक्ष’ हट्ने !
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । नेपाल शेर्पा संघको आगामी महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष हटाउने व्यवस्थाका लागि तयारी अघि बढाइएको छ । विधान मस्यौदा समितिले अहिले कायम रहेको बरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको जम्बो उपाध्यक्ष ‘टीम’ रहने व्यवस्था नराख्ने तयारी थालेको हो ।
नेपाली गल्फकी चम्किलो तारा प्रतिमा शेर्पासँगको कुराकानी
सामान्य परिवारमा जन्मिएर त्यही हुर्किएकी नेपालकी एक नम्बर महिला गल्फर प्रतिमा शेर्पाको कथा प्रेरणादायी छ।अारएनजीएसीकै छात्रवृत्तीमा ११ वर्षको उमेरबाट प्रतिमाले गल्फ खेल्न थालिन्। त्यसपछि उनको मेहनतले हालसम्म उनले ३५ उपाधि जितिसकिन्। यहीबीच अघिल्लो महिनामात्रै उनले पूर्व विश्वनम्बर १ कीर्तिमानी अमेरिकी गल्फर टाइगर उड्ससँग भेट्ने माैका समेत पाइन्।
हिमालका हिरो हिमचितुवा अर्थात आङरिता
सामान्यज्ञानमा एउटा प्रश्न छ– बिना अक्सिजन १० पटक सगरमाथा चढ्ने आरोही को हुन् ? लोकसेवा आयोगले बेलाबेलामा सोध्छ– हिमचितुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ ? यो दुई वटै प्रश्नको जवाफ हुन्– आङरिता शेर्पा । यी तिनै आरोही हुन्, जसले विज्ञानलाई समेत चुनौती दिए ।
एकै महिनामा तीन हिमाल आरोहण गर्दै निमाजाङ्मु शेर्पाले साहसिक विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी छन्। ६५ वर्षको आरोहण इतिहासमा एक महिनाभित्रै सगरमाथा, ल्होत्से र कञ्चनजंघाको सफल आरोहण गरेर निमाले पहिलो साहसिक आरोहीको कीर्तिमान बनाएकी हुन्।
दोलखा जिरी नगरपालिकाका पासाङ तेन्जी शेर्पाको नाम तीन क्षेत्रमा प्रसिद्ध छ । धेरैले पासाङ तेन्जीलाई आधुनिक फल किवि खेतीका किसान भनेर चिन्छन् । त्यसपछि उनी चिनिने अर्को क्षेत्र भनेको सामाजिक हो ।
हाइड्रो पावरको कार्यालय स्थानीयद्वारा तालाबन्दी
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधीमा शेर्पा संघ अध्यक्षको उम्मेद्वारी